Amathrendi Wokumaketha Okuqukethwe kwe-B2B | Martech Zone
Ubhadane luphazamise kakhulu ukuthambekela kokumakethwa kwabathengi njengoba amabhizinisi azivumelanisa nezenzo zikahulumeni ezithathiwe ukuzama ukuvimbela ukusabalala okusheshayo kwe-COVID-19. Njengoba izingqungquthela bezivaliwe, abathengi be-B2B bathuthele ku-inthanethi ngokuqukethwe nezinsizakusebenza ezibonakalayo ukubasiza ngokusebenzisa i- izigaba zohambo lomthengi we-B2B.
Iqembu eDigital Marketing Philippines lihlanganise le infographic, Amathrendi Wokumaketha Okuqukethwe kwe-B2B ngo-2021 ehambisa ekhaya izitayela ezi-7 maphakathi nokuthi abathengisi bokuqukethwe be-B2B baphendule kanjani kuzinguquko zezimboni nezokuziphatha:
Okuqukethwe Kubhekiswa Kakhulu - ukuhlukaniswa nokwenziwa ngezifiso kube okubaluleke kakhulu njengoba abathengisi babheka ukuhlinzeka ngolwazi oluhlosiwe. Ukuphathwa kokuqukethwe okuhambisana namapulatifomu wokumaketha kanye nobuhlakani bokufakelwa kunikeza ubuchwepheshe obudingekayo ukukhiqiza nokukala lokhu okuhlangenwe nakho okuhlosiwe.
Okuqukethwe Kuhlangana Kakhulu Futhi Kunesipiliyoni - umsindo, ividiyo, ukugqwayiza, ukubala, ukukhulisa, ukungathandwa kwabathelisi esikubona, kanye neqiniso elingokoqobo kuthuthukisa ulwazi lomthengi we-B2B… kusiza ukuholela ekuguqulweni.
Ukusetshenziswa Kokuqukethwe Nge-Mobile First - Akwanele ukwakha isayithi eliphendulayo elibukekayo kudivayisi ephathekayo ngemuva kokwakha ukubuka kwakho kwedeskithophu. Ama-cmopanies amaningi aya ngokushintsha ngamandla okuqukethwe nokuhlangenwe nakho abakulethela izivakashi ezingamaselula.
Ukumaketha kokuqukethwe kuziteshi eziningi - Ukuhlangana nabavakashi lapho bekhona kuya ngokugxeka njengoba abathengi be-B2B benemithombo engapheli. Uma umthengi wakho esesiteshini senhlalo, ukuxhumana nabo lapho kubalulekile. Uma zikumsindo (isb. I-podcast), ukuhlinzeka imininingwane lapho kuyadingeka. Uma bekwividiyo, okuqukethwe kwakho kungadinga ukuba naku-YouTube.
Ukumaketha kokuqukethwe kubuswa yi-Topical Authority - Imifudlana engapheli yokuqukethwe ayisebenzi njengoba izinkampani zibheka ukwakha ifayili le- eyodwa, umtapo wokuqukethwe ophelele okunikezayo okuqukethwe kongoti, okugunyaziwe nokwethembekile kubathengi abangaba khona njengoba bacwaninga ngezixazululo zezinselelo zebhizinisi labo.
Ukusebenza Kozakwethu Bokumaketha Okuqukethwe Okuqukethwe - Ubudlelwano obusetshenziswayo nokuqukethwe okukhuthaza okwenziwa ngezethameli ezifanayo kuyindlela ephumelelayo nephumelelayo yokushayela imiphumela yebhizinisi.
Ukumaketha kokuqukethwe Njengesevisi ekhishwe ngaphandle - Ngaphezu kwesigamu sazo zonke izinkampani ze-B2B zikhiphe ukukhishwa kokuqukethwe kwazo - ziqasha ochwepheshe abanamandla okucwaninga, okuklama, okubhala nokukopisha okungenzeka angabizi ngaphakathi.
Ukusiza ama-brand hyperfocus nokuthuthukisa amasu wokumaketha okuqukethwe kuzo zonke iziteshi nezindlela zokuxhumana kungumsebenzi wami engiwuthanda kakhulu namakhasimende. Izinkampani eziningi kakhulu zinomkhondo wokuqukethwe ongenawo amasu aphakathi nokushayela imiphumela yangempela yebhizinisi. I- fafaza uthandaze indlela yokuthuthuka kokuqukethwe (isb. X blog posts per week) akusizi ibhizinisi lakho… kumane kudala umsindo nokudideka okuningi.
Zizwe ukhululekile ukuxhumana nami uma udinga usizo. Sisize amabhizinisi amancane e-B2B ngokusebenzisa izinkampani zamabhizinisi ukusungula amasu wazo wokumaketha okuqukethwe ukushayela imiphumela elinganisekayo. Akuyona inqubo elula, kepha ithela ngendlela emangalisayo njengoba ibhizinisi lakho likwazi ukwakha ukungaguquguquki nenhloso ngemuva kwakho konke okuqukethwe abakuthuthukisayo, abakubuyekezayo, nabaphindayo.
Nayi i-infographic ephelele evela ku-Digital Marketing Philippines:
Tags: izihlokookugunyazayob2bumthengi we-b2bizigaba zomthengi ze-b2bb2b okuqukethweukumaketha kokuqukethwe kwe-b2bb2b izitayela zokumaketha kokuqukethweb2b izitayela zokuqukethweabathengi uhamboshayela esenzweniumtapo wokuqukethweUkukhangisa Okuqukethweukukopishaukukhushulwa okuphambeneukutholwa kwamakhasimendeubufakazi bamakhasimendedesignuchwephesheubuchwephesheinfographicukuhola isizukulwaneokuqukethwe umlinganiamademo womkhiqizoukuhambisanaucwaningosocial mediaubuholi bokucabangaukwethembaukwethembekaesingokoqobo virtualwhitepapers
Sep 10, 2013 ngo-10: 49 PM
Ngingathanda ukwabelana ngalokhu nozakwethu e-G plus. Lokhu kuzobasiza impela. 🙂